Shabakada Boxoffice India: Judwaa 2 wuxuu TV-yada ka noqday Blockbuster aan caadi ahayn – Filimside.net
Varun Dhawan hada wuxuu noqday sida atoore 25-sano fanka Hindiya kusoo jiray marka loo fiiriyo filimkiisa ugu dambeeyay Judwaa 2 inuu TV-yada la noqday Blockbuster aan caadi ahayn oo taariikh reebay (Extraordinary Blockbuster).
Waxaan horey idin kula wadaagnay Judwaa 2 fagtiisa hore inuu TV-yada Blockbuster ka noqday oo labo todobaad ku noqday, balse haatan marar kale ayaa TV-yada dib loogu soo celiyay dalabka qoysaska aad u sareeyo waana sababta keentay in Boxoffice India (BOI) mar labaad ay maqaal kasoo qorto.
Judwaa 2 wuxuu noqday filimka loogu jecel yahay looguna daawasho badan yahay aflaanta TV-yada laga daawaday 2017 kaliya Baahubali 2 ayaa laga jecel yahay waana guul taariikhi ah oo Varun Dhawan usoo hoyotay.
Judwaa 2 wuxuu Blockbuster ahaan ka weynaaday Dangal marka la is bar bar dhigo inta jeer ee lagu cel celiyay oo TV-yada laga daawaday tirada qoysaska ah daawadeen labadaan filim midaas ayaa muujineyso sida Judwaa 2 u noqday mashruuc guul lixaad leh TV-yada ka gaaray.
Judwaa 2 markiisa labaad ee Satelite-ka lagu soo daayay waxaa daawadeen 9-milyan oo qoys halka markiisii kowaad ay daawadeen 15-milyan oo qoys, sidaa darteed labo jeer oo kala duwan Judwaa 2 TV-yada laga daawaday 25-milyan oo qoys ayaa daawadeen!
Judwaa 2 daawashadiisa kowaad dhanka TV-yada wuxuu ku garaacay aflaan waa weyn sida Bajirao Mastani, Raees, Dilwale, Airlift, Kaabil marka labaad ee lagu soo celiyana safka hore ayuuba kasoo galay aflaanta ebid looga daawasho badan yahay dhanka TV-yada.
Fadlan hoos kaga bogo 5-filim ee 2017 ka noqdeen Blockbusters aan caadi ahayn dhanka TV-yada oo marar kala duwan lagu soo cel celiyay daawashadooda iyo tirada qoysaska daawadeen:
1. Bahubali – The Conclusion – 58-milyan iyo 500,000 oo qoys ayaa daawadeen
2. Judwaa 2 – 24-milyan iyo 500,000 qoys ayaa daawadeen mudo labo jeer oo TV-yada laga daawaday.
3. Dangal – 23-milyan iyo 900,000 oo qoys ayaa daawadeen.
3. DJ – (Filim Telugu ah Af Hindi lagu codeeyay) 21-milyan iyo 200,000 qoys ayaa daawadeen
5. Toilet Ek Prem Katha – 1.86 crore 18-milyan iyo 600,000 oo qoys ayaa daawadeen.
Labadii sano ee ugu dambeesay marka aan dib ugu laabano dhanka daawashada TV-yada waxaa ugu weyn Blockbuster ahaan Bahubali – The Conclusion iyo Sultan.
Baahubali 2 cid gaari karto malahan balse Judwaa 2 wuxuu hiigsan karaa inuu soo qabto Sultan oo 34-milyan iyo 500,000 oo qoys daawadeen 5-jeer kala duwan dhanka TV-yada lagu soo cel celiyay.
Judwaa 2 labo jeer oo lagu soo celiyay dhanka TV-yada 24-milyan iyo bar qoys ayaa daawadeen sidaa darteed sida Sultan oo kale ilaa tiro 5-jeer ah hadii lagu soo cel celiyo waa hubaal inuu Sultan ka tilaabsan doono!